Tababare Tite oo niyad jab weyn ku riday jamaahiirta reer Brazil, sababa la xiriira dhaawaca Neymar Jr – Gool FM
Tababare Tite oo niyad jab weyn ku riday jamaahiirta reer Brazil, sababa la xiriira dhaawaca Neymar Jr
Dajiye January 29, 2019
(Brazil) 29 Jan 2019.Tababaraha xulka qaranka Brazil Tite ayaa xaqiijiyay in uu u yeeri doono ciyaartoyda 100% diyaarka ah, si ay kaga qeyb galaan tartanka la qaban doono xagaagan ee Copa America.
Hadalka tababare Tite ayaa si cad ugu muuqan kara in Neymar Jr uu seegi doono tartanka Copa America ee xili ciyaareedkan, kaasoo lagu qaban doono dalka Brazil, waa hadii uusan kaga soo kabanin dhaawaca haatan uu qabo waqtiga ugu haboon.
Tababaraha reer Brazil ayaa go’aansaday inuu ku booqdo Paris Saint-Germain xidiga Neymar, si uu ula socdo xaalada dhaawac ee ciyaaryahanka kadib dhaawaca ka soo gaaray dhanka cagta bidix isla goobtii uu ka dhaawacmay ka hor Koobkii Aduunka ee xagaagii hore.
Neymar Jr ayuu soo gaaray dhaawacan isbuucii lasoo dhaafay, waxaana la tilmaamayaa inuu la mid yahay dhaawacii dhanka canqawga ahaa uu la kulmay xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
Hadaba tababare Tite ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Ma qaadi doono mas’uuliyad aan ugu yeeri doono Neymar Jr isagoo dhaawac ah, si uu kaga qeyb galo tartanka Copa America, xitaa hadii ay dhacdo inaan ku waayo shaqadeyda haatan”.
“Aad ayaan u murugeysanahay sababa la xiriira dhaawiciisan cusub, waan murugooday, laakiin ma doonayo inaan abuuro himilooyin kasta ee horumarin ah”.
HORDHAC: Newcastle United vs Manchester City
Vinícius Júnior oo sheegay ciyaaryahanka uu jeclaan lahaa in mustaqbalka dhow uu ka garab ciyaaro